‘नेपाली ‘हिरोइन’हरुबीचमा विवाद मिडियामा आउने ‘हेडलाइन’ले हो ‘ - Nepal Insider
Home/मनोरंजन/‘नेपाली ‘हिरोइन’हरुबीचमा विवाद मिडियामा आउने ‘हेडलाइन’ले हो ‘
‘नेपाली ‘हिरोइन’हरुबीचमा विवाद मिडियामा आउने ‘हेडलाइन’ले हो ‘
नेपाली चलचित्र जगतमा ‘होस्टल’ बाट डेब्यू गरेकी नायिका हुन स्वस्तिमा खड्का। उनले अहिलेसम्म ६ वटा चलचित्रमा कामको अनुभव लिइसकेकी छिन्। यो बिचमा स्वस्तिमाको केही सोलो त केही ‘मल्टी स्टार’ चलचित्रहरु आइसकेका छन्।
उनले अभिनय गरेका सबै चलचित्र व्यावसयिक रुपमा सफल भएका छैनन्। उनी अभिनित चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’ साउन ३० मा प्रदर्शन हुँदैछ। योभन्दा अगाडि स्वस्तिमाले काम गरेको चलचित्र ‘बुलबुल’ हो। चलचित्र क्षेत्रको बारेमा उनीसँग देश सञ्‍चार संवाददाता सुजाता खत्रीले पाँच प्रश्न सोधेकी छिन्।
१. अहिले तपाई कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हिजोआज अलि कम छ। ‘हजार जुनीसम्म’ को प्रोमोशनमा छु। एकै खालको रुटिन त छैन, बिहान कहिले छिटै हिड्नुपर्ने हुन्छ, कहिले पछाडि निस्कनु पर्ने हुन्छ। कहिले भिडियो, कहिले पत्रिकामा अन्तवार्ता दिइरहेको छु। समय एकै नाशको छैन। तर मलाई प्रमोशन एकदमै रमाइलो लाग्छ।
२. कलाकार बन्‍न गाह्रो है ?
यो मैले रोजेको क्षेत्र हो, मलाई याद भएदेखि मैले अभिनय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। इन्जिनियरिङ मैले मेरो बाबाले भनेर पढेको हुँ। मैले त्यतिबेला कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर कसैलाई केही पनि भनिन्। त्यो बेला कलाकार बन्छु, हिरोइन बन्छु भन्यो भने सबैजना हाँस्थे। अहिलेमात्र यसलाई पेशाको रुपमा लिइएको हो। त्यतिबेला रमाइलो गर्न मात्रै जाने भन्‍ने सोचिन्थ्यो।
म काममा ‘इन्जोय’ गर्छु तर अभिनय गर्न त्यति सजिलो छैन। पर्दामा चिटिक्क देखिनु अगाडि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। सुन्दर अनुहार, दर्शकको माया त सबैलाई याद हुन्छ। भित्रको काममा धेरै मेहनत हुन्छ, जति मेहनत गर्‍यो उति नै राम्रो चिज बाहिर निस्किन्छ।
३. होस्टलदेखि हजार जुनीसम्म आइपुग्दा तपाइमा के के परिवर्तन आयो ?
मैले चलचित्रको बारेमा पढेर आएको होइन। मसँग चलचित्र सम्बन्धि सिद्धान्तिक ज्ञान केही छैनन्। मैले सबै परेर जान्दै आएकी हुँ। पछिल्लो पटक काम गरेको चलचित्र ‘बुलबुल’ को एकदमै राम्रो टोली थियो । चलचित्र पढेको टोली थियो। परेर नजानिने त म भन्दिन। तर पढ्नु भनेको आफूलाई अझ चम्किलो हुने गरी पालिस घस्नु हो। मलाई पनि कहिलेकाँही पछुतो हुन्छ, ‘मैले केही पढेको भए, थिएटर ‘जोइन’ गरेको भए अझै राम्रोसँग आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्थे।’ भन्ने लाग्छ।
४. आजभोलित बोल्न पनि कम गर्नु भएको छ रे, हो ?
हो नि ! मिडियामा कुरा गर्दा सारै विचार पुर्‍याएर बोल्न पर्ने रहेछ। अहिले मिडियामा एक अर्कालाई जुधाउने फुटाउने काम धेरै हुन थालेका छन्। मलाई अभिनयको यात्रामा के अनुभव भएको छ भने मैले कसरी बोल्दा कसरी लेखिन्छ। त्यसैले मैले जे बोल्न खोज्दै छु, त्यसलाई मिनिमाइज गरेर सोचेर बोल्न थालेको छु। उहाँहरुको कारणले म जे हो त्यो बन्‍न, प्रस्तुत हुनै पाउँदिन।
मलाई के लाग्छ भने, नेपाली अभिनेत्रीहरुबीच जति पनि विवाद भएको छ, व्यक्तिगत व्यवहारले भन्दा पनि मिडियामा आउने समाचार अनि हेडलाइनले हो जस्तो लाग्छ। सबै मिडियामा होइन, तर केहीले आफ्नो ‘इथिक्स’ बिर्सिएर यस्तो समाचार लेख्छन्।
मेरै केशमा पनि भनौन।अस्तिको मेरो अभिव्यक्तिमा पूजा शर्माको नाम जोडियो। धेरैले मलाई सोध्नुभयो ‘तपाईले फोन गरेर कुरा सटआउट गर्नुभयो ?’ मेरो उसँग काम नै हुँदैन, कुरा गर्ने टपिक नै हुँदैन। यो संभव नै छैन। मैले फोन गरेर ‘यस्तो हैन है भन्नु भनेको त्यो कुरा स्थापित गर्न खोजेको जस्तो हुन्छ। मैले भनेकै होइन भने मैले किन फोन गरेर कुरा सट आउट गरौँ भन्‍ने भावना आउँदो रहेछ। यो ‘इगो’ त होइन।
केटाहरुको बिचमा यस्तो सुनिन्‍न, केटीहरुको भने कुरा काटेर बस्‍ने प्रवृत्ति छ। केटाहरु दुवैजना मिलेर गएर कुट्छन् भनेर डराउने भएर पनि हो की ? तर मलाई मतलब पनि लाग्दैन।
५.कलाकार सफल हुनु भनेको नाम, अवार्डजस्ता प्रसिद्धि पनि आवश्यक छन्, व्यावसायिक सफलता पनि आवश्यक छ। तर यो दुई बिचमा तपाइ एउटा कलाकारले नाताले कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
मैले चलचित्रमा काम गर्दा जहिले प्रड्यूसर खुसी भए/नभएको मूल्यांकन गर्छु। काममा एक त पैसा कमाउन पर्‍यो, अर्को भनेको समीक्षा राम्रो हुनैपर्छ। मैले गरेको पछिल्लो चलचित्र ‘बुलबुल’ ले मलाई दुईवटा अवार्ड दिलायो। तर यो चलचित्र छक्का पञ्जा २ जस्तो कमाउने चलचित्र हैन। मैले काम गरेका चलचित्र ‘फ्लप’ पनि भएको छ।
अभिनय त हाम्रो काम हो, नतिजा कस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो पात्रलाई ‘इमानदार’ भएर निभाउनुपर्छ। काम गर्नुअगाडि कामको विषयमा, काम गर्ने कलाकारहरुको विषयमा कसैप्रति व्यक्तिगत धारणा बनाउन चाँहि हुँदैन।